SEO wuxuu helayaa kufsi xun ... laakiin kan maahan! | Martech Zone
Jimco, Abriil 11, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dhagsii dhanka soo socda video:
Waxaa laga yaabaa in qaybta ugu fiican ee fiidiyowgaan ay tahay in taladu ay tahay mid fantastik ah - oo faahfaahsan oo sax ah labadaba
Waxaan ka helay fiidiyowyo yar oo dheeraad ah Shaqaalaha Qandaraaska, oo xitaa way ka sii badan yihiin fiidiyowyo kanaalka Chuck ee Youtube channel. Sidoo kale, iska hubi Blog-ga Chuck!
Tags: hawlgelinta macaamiishamaile ohyekhariidadda maskaxdadaanyeer feedhmyreponoiibinta
Haa, ugu dambayntii shaqadayda oo ah heesta kufsiga.
Waan jeclahay xaqiiqda inay jirto naag nasiib ah oo ku jirta cubicle gadaashiisa dhamaadka.
Waxaan u maleynayaa in fiidiyowgaan 'rap' uu helay "gic cubicle" halkii uu ka heli lahaa dhallaanka dhaca.
Jeclow fiidiyaha, waxa ugu fiican ayaa ah in waxa aad sheegayso ay sax yihiin. Waxba kuma jabna inaad ka dhigto barashada madadaalo, sii wad waxaad sameyneyso, waan kugu faraxsanahay adiga walaalkay iga yar